China Calcium Ammonium Nitrate (CAN) orinasa sy mpamatsy | Lemandou
Nitrogen total (toy ny N)%
Kalsioma (toy ny Ca)%
CAN dia manana kojakoja tsy voavaha 0,2% ary noho izany dia tsy miteraka olana amin'ny fanakanana ny nozera, ny lakan-drano na ny emitter.
CAN dia misy 25,5% ny kalsiôida oxide, mitovy amin'ny 18,5% amin'ny soluble calcium madio ao anaty rano.
Tsy misy loto toy ny chloride, sodium, perchlorate na metaly mavesatra. Vokatry ny zezika zavamaniry efa ho 100% izy io, noho izany dia tsy misy singa manimba ny voly.
Mampiroborobo ny fivoaran'ny rafitra faka izy io, mampitombo ny kalitao sy ny fanoherana ireo zavamaniry amin'ireo mpiasan'ny fitopatolojia.
Ny Nitrogen Nitrogen an'ny CAN dia tototry ny zavamaniry avy hatrany ary mampitombo ny fitrandrahana cations toy ny Calcium, Magnesium na Potassium.
Vokatra granular maimaim-poana.
1. Misy Nitrogen sy Calcium no ao aminy, ary koa manome Nitrogen hamboly haingana, Nitrogen Nitrogen tsy mila hafindra.
2. Ity vokatra ity dia zezika tsy miandany ary afaka manatsara ny kalitaon'ny tany.
3. Afaka manitatra ny florescence izy, mampiroborobo ny faka, fotony, ravina maniry ara-dalàna. Ny fiantohana ny lokon'ny voankazo dia mamiratra ary ny vatomamy voankazo dia azo ampitomboina.
4. Ny Calcium Ammonium Nitrate dia azo ampiharina amin'ny fitafiana ifotony sy ny fitafiana amin'ny sisiny, fa ny tena izy dia miankina amin'ny karazana toeram-pambolena sy ny faritra ary ny vanim-potoana.
5. Mahasoa indrindra nefa na izany aza rehefa ampisarahana ampiharina (raha azo atao) isaky ny 4 - 6 isan-kerinandro mba hiantohana ny famatsinana Nitrogen mitohy.
CAN dia azo ampiharina amin'ny programa fiterahana rehetra, hydroponics, fampiharana tany na koa fampiharana foliar. Noho ny fivezivezena faran'izay ambany amin'ny phloem, dia tsy maintsy ampiharina ny kalsioma mandritra ny tsingerin'ny fiainana ny zava-maniry mba hiantohana ny haavon'ireo otrikaina manan-danja ao amin'ny tavy anana sy hampiroborobo ny zavamaniry. Azo afangaro amin'ny zezika hafa izy io afa-tsy ny vahaolana amin'ny tahiry misy ireo vokatra misy phosfate na sulfate. Ohatra, raha afangaro amin'ny MAP (monoammonium phosphate) ohatra ny CAN, ny calcium avy amin'ny CAN sy ny phosphate avy ao amin'ny MAP dia mety hamorona calcium phosphate, izay tsy mety levona ary mipoaka, manentsina ny tsipika sy ny emitters mandritra ny fahavokarana.
Previous: Calcium Nitrate